सलाम छ यि महान छोरीलाइ: जसले आफ्नो कलेजो का टेर दिएर पितालाई बचाइन् – Wow Sansar
काठमाडौ। डेढ महिनाअघिसम्म काठमाडौं, हात्तीगौंडाका ५८ वर्षीय पदमबहादुर मल्ललाई खुसीका दिन आउलान् जस्तो लागेको थिएन । न त शरीर नै यति तन्दुरुस्त होला भन्ने लागेको थियो। एक वर्षअघि आफ्नो कलेजो बि ग्रि सकेको थाहा पाएपछि मल्ल परिवारमा खुसी हराएको थियो।एक वर्षदेखि र क्सी से वनका कारण कलेजोमा सिरोसिस भएपछि उनको यस्तो ह वि गत भएको थियो। तर गत जेठको तेस्रो साता टिचिङ अस्पतालमा उनको कलेजो प्र त्या रो पण सफल भएकाले मल्ल परिवारमा खुसी छाएको छ। *** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ***
यो खबर नागरिक दैनिकमा पवित्रा सुनारले लेखेकी छन्।अस्पतालका इ न्ट्रो ग्या स्ट्रोलोजी सर्जन डा। रमेश भण्डारीको नेतृत्वमा कलेजो प्र त्या रो पण भएको हो। उनलाई आफ्नै जेठी छोरी पुर्णी शाहीले कलेजो दान गरेकी छिन्।कलेजो दिएकी पुर्णी र पदमबहादुर दुवै खुसी देखिन्छन्, छोरी पितालाई बचाउन पाएकोमा र पदमबहादुर नयाँ जीवन पाएकोमा।
सोही क्रममा पदमबहादुरले छोरीले कलेजो दिएर आफूलाई नयाँ जीवन दिएको बताए।‘म छोरीप्रति असाध्यै ऋणी र खुशी पनि छु,’ उनले भने। यतिखेर पदमबहादुर स्वस्थ व्यक्तिसरह सामान्य खाना खानसक्ने भएका छन्। उठेर यताउति हिँडडुल गर्न पनि।उनको स्वास्थ्य सामान्य बन्दै गएकाले डिस्चार्ज गरिसकेको उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा. रमेशसिंह भण्डारीले बताए। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत कलेजो दिने छोरी र बाबु दुवैलाई डिस्चार्ज गर्न पाएकोमा आफूलाई ठूलो आनन्द मिलेको जनाए।‘मलाई आज धेरै आनन्द मिलेको छ।
Prevआज माघ १६ गते शुक्रबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
Nextमुक्तीनाथको मन्दिरमा १०८ धारा बनाउनुको र’हस्य खुल्यो! चोखो मनले सेयर गर्नुहोस पुण्य मिल्ने छ !